Hery Rajaonarimampianina : Olon’ny fihavanana -
AccueilRaharaham-pirenenaHery Rajaonarimampianina : Olon’ny fihavanana
01/08/2017 admintriatra Raharaham-pirenena 0
Tsy mba toy ireo filoha teo aloha miavonavona sy mahasahy manilikilika an-kolaka na mivantana ny mpiray tanindrazana aminy ny Filoha ankehitriny Hery Rajaonarimampianina. Asehony hatrany ny maha olon’ny fihavanana azy. Na io amin’ny asa na io amin’ny endrika mivantana mihitsy. Ny sabotsy hariva teo, dia nihaona nivantana tamin’ny Apanjaka Hiahaia Amada Andriantsoly tao amin’ny Zomba, tao Andavakotoka any Nosy Be ny tenany. Gaga ity raiaman-dreny ity nahita ny fahatsoram-pon’ny filoha Hery Rajaonarimampianina. Sambany tamin’ny tantara mantsy vao mba nisy filoham-pirenena nitsidika an’itony “raiamandreny” itony sy manome hasina azy. Endrika faly sy tamin-kitsi-po tanteraka koa no nandraisan’ity “Olobe” ity ny filoha Hery Rajaonarimampianina sy ny mpiara-dia aminy tamin’izany. Taorian’ny tafatafa dia nanome toky ny tenany fa handray an-tanana ny fanavaozana sy ny fanamboarana mety ilaina ao amin’ity Zomba ity.
Fa ankoatra ny fifandraisana mivantana amin’ny mpiray tanindrazana aminy, dia mifono hevi-dalina ihany koa ny firosoan’ny Filoha amin’ny fanarenana ireny lalam-pirenena samihafa izay efa drodroky ny taona sy potiky ny lasa ireny. Eo koa ny fanamboarana ny tetezana izay tena “lalan-drà” manodina ny fampandrosoana. Mbola ny “fihavanana” hatrany no fonosin’izany, ankoatra ny maha antoky ny fampandrosoana an’ireny làlana vita ireny. Fampihavanam-pirenena vita ho azy tokoa rehefa vita sy tsara ny lalana. Afaka mifamangivangy ny mpihavana rehefa vita soa aman-tsara ny lalam-pirenena toy ny Rn34, ny Rn35, ny tetezan’i Pomay, ny tetezan’i Kamoro, sns…Mbola ho avy koa ary ny lalambe migodana hampitohy an’Antananarivo – Toamasina izay azon’ny fiara andehanana ary ao anatin’ny fotoana vitsy monja dia tonga any an-toerana.
Fihetsiky ny SMM : Nanambany ny mpitsabon’ny Hjra
Zary toa manambany ny asan’ny mpitsabo indray. Izay no zava-misy ankehitriny ataon’ny Sendikan’ny Mpitsara eto Madagasikara na ny SMM. Araka ny efa fantatra mantsy, nahazo taratasy fahazoan-dalana manokana fanarahana fitsaboana any ivelany Ramatoa Claudine Razaimamonjy. ...Tohiny